Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Alvaro Morata ayaa qaabtay habeen uu doonayo in uu iloobo kulankii ay kooxdiisu guusha ka gaartay kooxda Burnley.
Morata ayaa fursad loo siiyay in uu is muujiyo isaga oo hogaaminayay weerarka Blues oo uu la hogaaminayay xiddiga Giroud waxana uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u liita.
Alvaro Morata ayaa iska khasaariyay fursad furan oo uu kaliya goolhayuhu ka xigo goolka waxana uu uga fal celiyay si waali ah mark badalka lagu sameeyay Laacibtv Ka Daawo Muuqaalkan
Rajadii Ateltico Madrid Ee Koobka La Liga Oo Soo Dhamaatay Iyo Real Sociedad Oo Markale Barcelona U Sahashay In 3 Dhibcood Oo Kaliya Ay Uga Baahato Shanta Kulan Ee Hadhsan.
Kooxda Atletico Madrid ayaa si dhab ah u lumisay rajadii yarayd ee ay ka lahayd koobka La Liga kadib markii ay xaquuq kala soo kulantay kooxda Real Sociedad oo ay marti u ahayd. Barcelona ayaa haddaba 3 dhibcood oo kaliya u jirta in ay koobka La Liga ku guulaysato laakiin iyada oo aan kubbad baasan ayay koobkan qaadi kartaa haddii ay dhibco kale Atletico Madrid ku lumiso kulamada Real Betis iyo Alaves oo ay ciyaari doonto ka hor Barcelona inta ayna La Liga ku soo laaban.
Barcelona ayaa oo iyaduba barbaro la gashay kooxda Celta Vigo laakiin guuldarada soo gaadhay Atletico Madrid ayaa ka dhigaysa in Barca ay haddaba hogaanka La Liga ku hayso 12 dhibcood oo saafi ah iyada oo shan kulan ka hadhsan yihiin dhamaadka xili ciyaareedkan.
Kooxda Real Sociedad ayaa 3-0 ku soo xasuuqday kooxda Diego Simeone ee Atletico Madrid iyada oo ay goolasha Sociedad kala dhaliyeen Willian José (27) Juanmi (80) Juanmi (90+2) waxayna hadda Atletico Madrid is arkaysaa iyada oo quus dhab ah ka taagan in ay Barca la tartanto.
Haddii ay Atletico Madrid wada guulaysato 5 kulan ee u hadhsan isla markaana ay Barcelona wada guuldaraysato 5 kulan ee u hadhsan oo kaliya ayay Atletico Madrid koobkan ku guulaysan kartaa taas oo hadda ah mid suurtogalnimadeedu aad u adag tahay.
Barcelona oo 83 dhibcood ka soo heshay 33 kulan ayaa 12 dhibcood ka saraysa Atletico Madrid oo 71 dhibcood ka heshay isla 33 kulan, taas oo la micno ah in haddii ay Atletico Madrid guuldaro kala kulanto Real Betis inta ay Barca ku mashquulsan tahay Copa Del Rey in markaas ay kooxda Valverde isla usbuuc kuwada guulaysan karto koobka La Liga iyo haddii ay Sevilla koobka boqorka Spain kaga adkaato.
Waxay hadda u muuqataa in Atletico Madrid ay muhiimada kowaad saari doonto afar dhamaadka Europa League oo ay Arsenal la ciyaari doonto taas oo waqtigii la filayay ka soo dadajin karta in koobka La Liga ay kooxda Valverde si rasmi ah oo xisaab ah ugu guulaysan karto.
Barcelona ayaa marka ay soo dhamaysato finalka Copa Del Rey la ciyaari doonta kooxda Deportivo waana kulanka ay La Liga ku guulaysan doonto haddii ay kooxda Atletico Madrid dhibco kale sii lumiso kulamada Real Betis iyo Alaves taas oo la micno ah in kulanka El Clasico-da ay Barca ciyaari doonto iyada oo Championska Spain ah.
Jose Mourinho Oo Isha Ku Haya Fred, Chelsea Oo Eeganeysa Seri & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Maanta Oo Arbaco Ah.
Jose Mourinho ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo xidiga reer Brazil Fred si uu badal uga dhigo Paul Pogba, City ayaa sidoo kale dooneysa. (Mirror)
Real Madrid ayaa xiiseyneysa iney lasoo saxiixato Paul Pogba, balse Perez marnaba ma doonayo inuu xidigaan keeno xitaa hadii uu hoos u dhigo mushaarkiisa. (Express)
Man City ayaa quuldareyneysa iney lasoo saxiixato 19-jirka PSG Kylian Mbappe iyo 27-jirka Bayern Munich Thiago Alcantara. (Sky Sports)
Dortmund ayaa dooneysa iney si joogto ah ula wareegto Michy Batshuayi, balse Blues waxey doonesaa iney ku hesho xidigaan 50 Malyan oo Pound. (Evening Standard)
Luke Shawayaan wali go’aan ka gaarin mustaqbalkiisa Man United. 22-jirkaan heerka caalami waxaa la filayaa inuu dhamaadka xilli ciyaareedka go’aan qaato. (ESPN).
Barcelona ayaa kusoo biirtay kooxaha doonaya Anthony Martial iyadoo diyaar la ah 60 Malyan Oo Pound. Sidoo kale 17-jirka Fulham Ryan Sessegnon ayey ka doonayaan suuqa xagaaga. (Mail)
Tottenham Iyo Liverpool ayaa ka mid ah kooxaha wakiilada soo daawada u diray garabka reer Benfica & qaranka Serbia Andrija Zivkovic kulankii ay Axaddii la ciyaareen Porto. (The Sun)
Chelsea ayaa dooneysa iney aduun dhan 35 Malyan oo Pound kula soo wareegto xidiga Nice Jean Michael Seri, balse xidiga reer Ivory Coast wuxuu sugi doonaa macalinka xiga ee kooxda. (Mirror)
Kooxaha Reer China Tianjin Quanjian iyo Chongqing Dangdai ayaa si weyn u xiiseynaya kabtanka Barcelona Andreas Iniesta. (Mirror)
Barcelona Oo Isbuuca Dambe Ku Wada Guuleysan Karta Copa del Rey & Horyaalka La Liga – Balse Waa Iney Arrimo Qariib Ah Dhacaan.
​Dhibicdii ay ka heleen Celta Vigo xalay waxey si gaabis ah ugu riixday iney horyaalka La Liga ku guuleystaan, balse sidoo kale waxey soo dhaweysay iney laba koob ku wada guuleystaan inta lagu jiro isbuuca soo aadan.
Koobka koowaad wuxuu noqon doonaa Copa del Rey, balse waa iney guul ka helaan kooxda Sevilla maadaama ay habeenka sabtida isku wajahi doonaan garoonka Wanda Metraplitano.
Balse Blaugrana waxey ku guuleysan kartaa horyaalka La Liga – hadii ay dhacaan laba arrimood oo aysan u badneyn iney dhacdo.
Marka ugu horeysa – Real Madrid iney caawa guuldaro kala kulanto kooxda Athletic Bilabo kulan ka dhici doona garoonka Estadio Santiago Bernabeu, waana natiijo xaqiijin karta in Madrid uu horyaalka xisaab ahaan kaga dhintay.
Intaas waxaa sii dheer in Barcelona ay rajeyso wixii markaas ka dambeeya in Atletico Madrid ay laba kulan oo xiriir ah guuldareysato – kulanka ay habeen dambe la ciyaari doonto Real Sociedad iyo kulanka xidga ee Real Betis.
Wey adag tahay iney sadexdaan dhacdo is raacdo si ay Barcelona isbuuca soo aadan ugu dabaal dagto laba koob, balse sidey u badan tahay horyaalka La Liga dhankeeda ayuu u dhintay.
Neymar Oo Jamaahiirta Brazil La Wadaagay Waqtiga Uu Kasoo Kabanayo Dhaawaca & Walaac Yar Oo Ku Aadan Tijaabada Labaad.
​Weeraryahanka Paris Saint Germain Neymar Junior ayaa mar qura ka farxiyay dadka reer Brazil ee sugaya inuu soo caafimaado kadib markii uu carabka ku dhuftay waqtiga uu kasoo kabanayo dhaawaca uu la jiifo haatan ee u diiday inuu garoomada kubadda cagta ciyaaro.
Neymar wuxuu ka jabay cagta intii lagu jiray bishii February ee lasoo dhaafay, tan iyo markaas kama soo muuqan garoomada kubadda cagta, balse haatan wuxuu shaaca ka qaaday inuu soo laaban doono bartamaha bisha May.
Neymar oo ka qeyb galay bandhig ay shirkadda laga leeyahay dalka China bandhig ku saabsan qalab ay soo saarto uga sameyneysay magaalada Sao Paulo ayaa la weydiiyay waxa ku saabsan dhaawaciisa.
Neymar inkastoo uu shaaca ka qaaday waqtiga hadana walaac yar ayuu ku abuuray qof walba maadaama uu sheegay in tijaabada labaad ay wax walba ku xiran tahay lagana yaabo iney arinta sida la fiayo ka xumaato.
“Ma jiro waqti rasmi ah, tijaabadii ugu dambeysay ee aan maray, hadii aanan qaldamin – mana hubo waa 17-ka May” ayuu yiri Neymar Junior.
“Waxaa la cadeyn doonaa inaan ciyaaro. Kadib waan arki doonaa, waxey ku xiran tahay sida aan hormar u sameeyo, waxey ku xiran tahay tijaabada xigta, wali wax la go’aamiyay ma jiraan”
“Waxaan rajeynaa inaan Tv-yada ka daawan koobka Aduunka”
“Waxaan heystaa waqti fiican oo aan isugu diyaariyo, waxaan gaari doonaa halkaas anigoo sidii hore ka fiican”
Ronaldinho Caucho Oo Soo Booqday Wadan Daris La Ah Somalia, Soo Dhaweyntii Loo Sameeyay & Sababta Ka Dambeysa Oo La Ogaaday.
Halyeeygii hore Brazil Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho Gaúcho” ayaa booqasho ku yimid dalka Ethiopia oo daris la ah Somalia, waxeyna sababtu tahay inuu ka mid ahaa wafdigii ay shirkadda Heineken u xil saartay ine soo wareejiyaan koobka UEFA Champions League oo maraya heerarkiisii ugu dambeeyay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Dr. Workneh Gebeyehu ayaa xafiiskiisa kusoo dhaweeyay xidigii hore Barcelona kaas oo sidoo kale soo dhaweyn aan caadi aheyn ka helay dadka reer Ethiopia ee aadka u jecel ciyaaraha.
Dr. Workneh wuxuu u sheegay Ronaldinho in diblomaasiyadda ciyaaraha ay hadda tahay midda ugu muhiimsan waqtigaan casriga ah.
Sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in ciyaaraha ay tahay kaliya mihnadda qura ee isku soo jiidda dad kala midab, jinsi iyo diin duwan – isla markaana ay tahay mihnad hormartay oo aduunka looga shaqeysto.
Dr Workneh oo faaninaya halyeeyada orodka looga haray ee dalkiisa sidoo kalana inyar tilmaamaya in Brazil ay tahay dadka kubadda cagta laga soo gaaray wuxuu yiri: “Brazil waa hoyga halyeeyada kubadda cagta, halka Ethiopia lagu garanayo iney hoy u tahay halyeeyada orodka dheer”
Si kastaba ha ahaateen Ronaldinho Caucho ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka National Stadium halkaas oo kulan yar loogu sameynayay soo dhaweynta koobka horyaalada yurub.
Waali, Daawo: Caawiyaha Garsoore Rikoore Dhigay Xilli Ay Xiddiguhu Galeen Qolka Labiska Qaybtii Nasashada, Maxa Dhacay Intaas Kadib
​Xilli ay qaybtii hore ee ciyaartu dhamaatay xiddiguhuna galeen qolka Labiska Muuqaalka garsooraha caawiya ee VAR ayaa rikoore ku abaal mariyay koox kulan ka tirsanaa horyaalka Germany.
Kulanka ayaa u dhexeeyay kooxaha Mainz iyo Freiburg kulan ka tirsanaa horyaalka Bundesliga kaas oo la ciyaaray xalay oo Isniin ahayd.
Kulanka ayaa ahaa mid muhiim ah maadama ay labada kooxoodba u dagaalamayeen sidii ay uga sii mid ahaan lahaayeen horyaalka xilli ciyaareedka dambe.
Xiddigaha kooxda Freiburg ayaa ka dareeray garoonka si la mid ah kuwa Mainz laakiin garsooraha oo aan wali bixin ayaa loo sheegay in gacanta lagu qabtay kubada isaga caawin ka helaya VAR
Garsooraha ayaan dib ugu yeedhay xiddigaha labada kooxood oo qolka labiska galay isaga oo sidaas ku dhigay rikoorada kooxda Mainz